काठमाडौँ । चाहानाको उत्कृष्टताले मान्छेलाई प्रेरित गरेको हुन्छ । मान्छे कुनै न कुनै रुपमा आफनै इच्छाको वैतर्नीको लागि उन्मुख हुन्छ । नदीको भेललाई पनि झिनो देख्छ । इच्छाशक्तिलाई मान्छेको तत्परताले अभावको बिचमा पनि सामथ्र्यवान तुल्यादिन्छ । त्यस्तै एक महिला हुन कमला निरौला ।
महेन्द्र मावी चक्रघट्टी सुनसरीबाट एजुकेशनमा प्रमाणपत्र उर्तिण गरेकी निरौला बानियाटामर बसेर शामाखुसी क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि पिसफुल ब्युटिपार्लर एण्ड टेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएकी छिन । निरौला आफु स्वरोजगार भएर थुप्रै महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकेको खुसी छिन ।
पछिल्लो समय महिलाहरु पनि विदेशीने क्रम बढ्दै गरेको, घरमा छोराछोरी आमाको अभिभावकको माया, ममता स्पर्शबाट टाढा रहनु परेको यथार्थलाई आत्मसाथ गरेर बजारमा तथा गाउँमै पार्लर सञ्चालन गरेर स्वाभलम्वी बन्न सक्ने उनको बुझाई छ । नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा विदेश गएका महिलाहरु खसीबोका झै किनबेच हुने गरेको कुरा बाहिर निश्किरहेको छ । महिला हिंसा बढेका घटनाहरु सुनिरहदा पनि महिला आफै आर्थिक रुपमा सक्षम भएको सन्र्दभमा स्वालम्वी हुन सकेको खण्डमा विभेद पनि कम भएर जान्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण घरभित्र चुलोचौकामा मात्र सिमित हुनुपर्छ महिला भन्ने पुरानो मान्यतालाई विस्थापित गर्न घरको काम सकेर पार्लर सञ्चालन गरेर पनि आत्म निर्भर बन्न सक्ने बताउछिन कमला ।
त्यसो त सीप सिकेर जहाँ गएर पनि बाँच्ने आधार हुन्छ । पार्लर भन्दा अरु पनि महिलालाई आत्म निर्भर हुने थुप्रै बाटाहरु छन् । महिलाले घरको सबै काम आफै भ्याउनु पर्ने हुन्छ, घरभित्रको, बाहिरको,घरपरिवार छोराछोरी, खानपिन देखि लिएर हरेक कामबाट चारैतिर छेकिएका हुन्छन् । यी सम्पूर्ण काम भ्याएर निरौला पार्लर पुग्छिन ।
शुरुमा १ लाख ५० हजारको लगानीमा शुरुवात गरेको व्युटिपार्लरबाट महिनाको लगभग २० देखि २५ हजारसम्म बचत हुने गरेको बताउदै उनी भन्छिन “अहिले धेरै पार्लर खुलेकोले घटेको हो । ” उनी भन्छिन “हरेक मानिसमा २ वटा धार हुन्छन् सत्कर्म र कुकर्म । हामीले सत्कर्ममा लाग्नुपर्छ । ” निरौला थप्छिन “आमा बाको आत्मसम्मानले बाँच्नु पर्छ भन्ने प्रेरणाबाट प्रभावित मलाई सत्कर्मको बाटोबाट अगाडि बढि एउटा महिलाको नाममा पुरुष प्रधान समाजमा छुट्टै एउटा उदारणीय व्यक्तिको रुपमा नाम बनाउनु थियो ।”
मेहनत गरे पछि जस्तोसुकै कार्य पनि गर्न सक्ने भन्दै उनले महिलाले आत्मनिर्भर हुने कुरामा सचेत हुनु पर्ने उनको बुझाई छ । कमला भन्छिन“संर्घर्षका ती दिनहरुको स्मरण गर्दछु गर्भले छाति ढक्क फुलेर आउछ । दुख, सघर्ष , कडा मेहनत र लगनशीलताको समिश्रणबाट एउटा जीवनको अध्याय शुरु हुन्छ ।” थप्दै भन्छिन “जिन्दगी जीउन सजिलो छैन, चुनौतिपुर्ण छ ।” शुरुमा काठमाडौं आउदा २ वटा बच्चा च्यापेर आएको सम्झदै उनी भन्छिन गाह्रो थियो । “श्रीमानको आर्मीको जागिरको भरमा एउटा रुममा बसेर सबै आवश्यकताहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्थो ।”निरौला स्मरण गर्छिन् ।
“समाजमा चुलोचौकामा सिमित हुनुपर्छ भन्ने साधुरो मानसिकतालाई थर्थाथमा चुनौति दिन मैदानमा उत्र्रेकी पात्र थिए म ।” निरौला सोचमग्न हुदै भन्छिन “कडा मेहनत र लगनशीलताले म सफल छु । शुरुमा परिवारदेखि नै विद्रोहको बाबजुत पनि म निकै संघर्ष गरेर आए । म आज सन्टुष्ट छु सबै जना मसँग खुसी हनुहुन्छ ।”
विस्तारै पार्लरको मेहनतले उनका असहजतालाई सजिलो बनाउदै लग्यो । उनलाई महिला आफै कमजोर होइनौ, केही गर्नु पर्छ भन्ने कुराले एकान्तमा भित्रैबाट कोक्याउने गथ्र्याे । उनको इच्छा शक्तिले त्यतिकै घरमा बसेर समय ब्यतित गर्नै दिएन । निर्रौला भन्छिन “घरै श्रीमानले कमाएर कहिले दिन्छ भनेर बस्न हुदैन महिला पनि काम गर्न सकिन्छ, हामी आफ्नो लागि आफै गर्न सक्नु पर्दछ । ”
“गरेरै छाड्ने दृढताले पनि मलाई यहाँसम्म ल्याएको हो ” उनी बताउँछिन । बच्चा साना थिए । सबै कुरा मिलाउनु पथ्यो । बच्चा हेर्दै शुरुमा ग्यालरिमा काम गरेको उनी सम्झिन्छिन । उनले क्यान्टीनमा काम गरिन, १ वर्ष आर्ट ग्यालरीमा, र १ वर्ष आराधाना बेर्डिङ स्कुलमा पढाइन र लगभग २ वर्ष सम्म विभिन्न कोर्शहरु सिकेर २०६३ सालबाट पार्लर सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । पार्लर सिक्दा २ वर्ष सिकेको १ वर्ष काम गरेको बताउछिन । सर्टिफिकेट नै धेरै छन् । १ वर्ष काम गर्दै सिके ।
जीवललाई कसरी एउटा बाटोमा निरन्तरता दिने भन्ने उनको उकुसमुकुस अन्ततः पार्लरमा आएर थेग्रीएको उनले विश्लेषण छ मार्केटिङ गरिन, क्यान्टिन चलाइन, स्कुलमा पढाई कतैबाट पनि उनको मनले सन्तुष्टि नमान्नु नै पार्लर खोल्नको लागि मार्ग प्रशस्त भएको उनी बताउने निरौला संघर्ष विना सफलता हात पार्न नसकिने बताउछिन । यी सबै कामबाट पैसा जम्मा गरेर उनले बिउटी पार्लरको तालिम लिएकी थिइन् ।
निरौला भन्छिन “मैले कसैसँग एक पैशा माग्नु पर्दैन हरेक कार्यका लागि मेरो कमाइ मैले आफ्नै ढंगले प्रयोग गर्न पाउछु । आर्थिक रुपमा बलियो हुनु नै महिलाको लागि महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग अनुभव गरेकी छु । ”बचाउदै बचाउदै धेरै समान बढाउदै गएको उनी सम्झिन्छिन । अहिले सबै राम्रो छ । पहिला मान्छे कम थिए पार्लर कम थियो अहिले मान्छेसँगै पार्लर पनि बढेर गएको बताउछिन । यति भिडभाड छ अझ बढि आम्दानी हुन्छ होला ? भन्दा उनी भन्छिन “राम्रा सामान किन्दा लगानी पनि त्यहि अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ ।”
उनले ट्रेनिङ पनि गराउछिन । “बेसिक एड्भान्स , टिचर टेनिङ सिकाउछु” । सिकाउने पुनम लामिछाने को प्रेरणाले आफुलाई व्यवसायिक रुपमा स्थापित गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको उनको भनाइ छ । कमला भन्छिन “मेरा हरेक आवश्यकताहरु म आफै सजिलोसँग पुरा गर्न सक्छु । ” अझ थप्छिन “ सीप सिके आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छु अहिले हाम्रो आफ्नै घर छ, खुसी परिवार छौं, जीवनमा चाहिने नै के हो र ? म सन्तुष्ट छु। ”
आफै घर चलाउनु भनेको राम्रो कुरा हो , श्रीमानको भर पर्नु परेन कतिबेला श्रीमानले र्पैशा दिन्छ र सपिङ गर्न जाउ भन्ने अवस्था उनलाई कहिल्यै पनि आएन । सानै देखि भित्रि इच्छा यसमा भएकाले पनि सफल हुन सकेको उनलाई लाग्छ । पार्लरमा सबै खालका मान्छेहरु आउछन , सबैसँग परिचय हुन्छ चिनजान हुन्छ रमाइलो हुन्छ । म त्यसै घरमा बस्न सक्दिन काममा आइहाल्न मन लाग्छ घरमा त्यतिकै बसिरहन मनै नलाग्ने हुन्छ । श्रीमानको भर पर्नु परेन दुबै जना विजि हुन्छौं । समय मिलाएर घरको काम गर्छौ । म आफैले कमाउछु उसले दिनु पर्दैन ।
“सानै देखि नक्कल गर्न मन लाग्ने भएर पनि होला लिविस्टीक पाउडर लगााउन धेरै मन पर्यो अहिले लाग्छ त्यो पार्लर प्रति भित्रै देखि एउटा उर्जा रहेछ । ” “आँखामा आइस्याडो लगाउन मन लाग्ने गाजल लगाउन मन लाग्ने स्कुल पढ्दा पनि आइस्याडो लगेर सबै जना मिलेर लगाउथ्यौं । रातै भएर बसेका थियौं ।” सबै क्लासलाई रातै बनाएर आफु पनि रातै भएर बसेको देखे पछि तिन कक्षामा पढ्दा सरले घरमा ममीलाई बोलाउनु भएको थियो आज लाग्छ त्यो मेरो ब्युटिसियन बन्ने लक्षण थियो ।
काठमाडौं । सामाजिक संजालमा अमर्यादित अश्लिल तथा उत्तेजित अन्तरवार्ता संचालन गरेको अभियोगमा फुल्चोकी मिडिया ग्रुपका संचालक राजकुमार कुँवर, कार्यक्रम संचालिका लक्ष्मी मोक्तान तथा अश्लिल अन्तरवार्ता दिने मोडल परी तामाङलाई मंगलबार
जनवादी गीत गाउदै राजनीतिमा आएकी सानु सिवा
काठमाडौँ । सानु सिवा इलामबाट नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । दलित साहित्य साँस्कृतिक प्रतिष्ठानकी सदस्य समेत रहेकी सिवाले थुप्रै जनवादी गीतहरु गाएकी छन् । शारीरिक रुपमा रोगले ग्रस्त उनको जीवनी बलियो
सामाजिक कार्यकर्ताबाट राजनीतिमा आएकी मीना बुढा
काठमाडौँ । मीना बुढा २०२० सालमा बुबा चन्द्रसिंह बुढामगर र आमा कौशल्या बुढाबाट रोल्पामा जन्मिएकी हुन् । उनका बुबा बसाइँसराइ गरी दाङमा झरेका थिए । उनको बिहे थवाङमा भएपछि उनले
राजनीतिमा समर्पित उमा रेग्मी
काठमाडौँ । विसं २०११ सालमा केराबारी गोर्खामा आमा लक्ष्मीदेव र बुबा खडानन्द रेग्मीको कोखबाट उमा रेग्मीको जन्म भएको हो । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएकी उमा रेग्मी हाल नेपाली काँग्रेसकी समानुपातिक सांसद
प्रतिबन्ध होइन संविधान विरोधी गतिविधि नियन्त्रण : नारायणकाजी श्रेष्ठ